AMD na Samsung: mmekorita iji melite egwuregwu na gam akporo | Site na Linux
AMD na Samsung: mmekorita iji melite egwuregwu na gam akporo
Android enweworị mkpa ikwu na ụwa egwuregwu vidiyo. Enwere ọtụtụ ọrụ maka obere njikwa ndị dabere na ikpo okwu a, yana mobiles ịgba egwu dịka ị maara. Mana site na oru dika AMD na Samsung, enwere ike ọ ga - aga n’ihu na - enweta ọmarịcha akụkụ mpaghara ntụrụndụ.
Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ abụọ ahụ jikọrọ aka rụọ ọrụ na GPU ọhụrụ mepụtara iji buru Radeon ndịna-emeputa na mobile ngwaọrụ (mbadamba na smartphones). A ga-etinye GPU ọhụrụ ndị a dị ka akụkụ nke Exynos SoC nke Samsung dị elu. N'ụzọ ahụ, ha nwere ike iwepu ARM Mali dị ugbu a, nke na-anaghị enye nsonaazụ a tụrụ anya ma e jiri ya tụnyere Adreno dị ike.
N'ezie, so na ihe ịga nke ọma nke Qualcomm Adreno Ọ bụ n'ihi AMD n'onwe ya (ATI), ebe ọ bụ na ha rere nkewa ha nke igwe eserese eserese na-arụ ọrụ (ATI Imageon) ma ọ dabara n'aka Qualcomm na 2009, mgbe ha gụgharịrị ha Adreno. Ugbu a, site na njikọ AMD / Samsung ọhụrụ a, Exynos ga-enwe ike ịsọ mpi na Snapdragon dị ike karịa na arụmọrụ nke eserese.
Laghachi isiokwu nke GPU maka Exynos, iji kwuo na ọ dabere na ụlọ RDNA nke na-enye AMD Radeon RX 5000 Series aka ugbu a. Na dabere na nyocha nke oge mbụ (na enweghị nkọwa ikpeazụ), ha yiri ka ha karịrị ụdị Adreno kachasị ike n'ebe ahụ taa (Adreno 650).
Dabere na benchmark nke na benchmark, Adreno na-enweta 123 FPS na ule GFXBench's Manhattan 3.1, 53 FPS na Aztec Nkịtị, yana 20 Fps na Aztec High. Mana AMD / Samsung GPU na-enweta 181 Fps, 138 Fps na 58 Fps n'otu n'otu. Promkpụrụ dị oke mma maka mmekọrịta a na ọdịnihu na eserese na gam akporo.
Ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga dị ka atụmatụ, GPU ọhụrụ nwere ike ịdị na Exynos nke 2021. Enwere ike ịhụ ha na Galaxy S21 na Galaxy S30. Na ụdị ndị ahụ, eserese eserese agaghị enwe nsogbu ọbụlagodi na enweghị mgbawa Qualcomm n'ime ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » android » AMD na Samsung: mmekorita iji melite egwuregwu na gam akporo
Ha na-ekwupụta mmepe nke Popcorn na Linux Kernel
Nkwado Borg: Ezigbo System Management System